Firongatry ny valanaretina tao anatin’ny roa andro: roa ny matin’ny covid-19, 156 ny tranga vaovao | NewsMada
Hiditra amin’ny hamehana ara-pahasalamana ho an’ny 15 andro manaraka isika. Tafakatra 18 izany izao ireo namoy ny ainy noho ny covid-19 hatramin’ny 19 marsa no ho mankaty rehefa niampy roa izany, omaly, araka ny antontanisa navoakan’ny teo anivon’ny CCO.
Telo izany ireo nodimandry noho ity valanaretina ity, hatramin’ny alakamisy teo, nahafatesan’ilay vehivavy 46 taona. Miisa 12 ireo maty tany Toamasina raha dimy kosa avy eto Antananarivo ary tsy nambara kosa ny fiavian’ny iray amin’izy 18 ireo.
140 amin’ireo 156 avy eto Analamanga avokoa
Tsy vitan’izany fa nirongatra tanteraka ity valanaretina ity tato anatin’ny roa andro farany. Miisa 156 izany ka 83 ny tranga vaovao, ny asabotsy ary 66 kosa ny alahady. Avy eto Analamanga ny 140 amin’ireo. Tsy nisy afa-tsy roa ny avy any amin’ny faritra Atsinanana, foiben’ny coronarivus teo aloha.
Ho an’ny antontanisa, tao anatin’ny herinandro teo kosa, tafakatra 475 ireo mararin’ny covid19 ka ny alatsinainy : 44, ny talata : 84, ny alarobia : 63, ny alakamisy : 42. Anisan’ny ambony indrindra hatramin’izao kosa ny tranga vaovao ny zoma teo, miisa 93 raha 83 kosa ny asabotsy ary miisa 73 ireo nifindran’ny valanaretina ny alahady.
Na izany aza, miisa 82 ireo sitrana tao anatin’ny roa andro farany ka maro anisa amin’izany ny avy any Toamasina.
Miisa 34 ireo distrika ahitana covid-19
Etsy an-daniny, efa ahitana ny coronavirus avokoa ny faritany enina. Mbola voalohany amin’ny hamaroan’ny tratran’ity valanaretina ity ny any Toamasina raha faharoa Antananarivo. Fahatelo sy fahefatra Toliary sy Fianarantsoa ary fahadimy Mahajanga. Any amin’ny fahenina kosa ny any Antsiranana. Miisa 15 ireo faritra misy izany amin’ireo faritra 22. Hany tsy ahitana izany covid-19 izany hatreto, ny faritra fito : Vatovavy Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Melaky, Androy, Sofia, Betsiboka, Amoron’i Mania. Na izany aza, miisa 34 ireo distrika efa misy izany valanaretina izany, amin’izao fotoana izao ka anisan’ny farany teo ny any Anosibe Anala. Nialoha izany ny any Sambava (Sava).